Abathathu abana-16 bathole izingane ngoKhizimusi eKZN | News24
Abathathu abana-16 bathole izingane ngoKhizimusi eKZN
eThekwini - Yize uKhizimusi kuyisikhathi sentokozo nenjabulu, ikakhulukazi lapho kuzalwa khona izingane, uNgqongqoshe wezeMpilo eKZN ukhathazekile ngokuthi bathathu omama abasebancane kakhulu abathole izingane ngalolu suku.
Ngokwesitatimende esikhishwe wuMnyango wezeMpilo kulesi sifundazwe lapho bekunconywa khona ukuthi zingu-50 izingane ezizalwa ngalolu suku.
UMEC uSibongiseni Dhlomo ubehambele esibhedlela iKing Edward Viii lapho kutholakale khona ukuthi zingu-28 izingane ezibelethelwe lapha, abafana abangu-16 kanye namantombazane angu-12.
UDhlomo ubekhathazekile ukuthi kunomama abebengawuhambeli umtholampilo futhi bengabhukhelwe ukuba bangabelethela kulesi sibhedlela.
“Le akuyona indaba enhle ongayixoxa ngoba kulesi sifundazwe sifuna ukuqinisekisa ukuthi omama bathola izingane ezinempilo. Ukungayi emtholampilo uma ukhulelwe kubeka impilo yengane engcupheni. Ngisho nomangabe unesandulela ngculazi kumele uwuhambe umtholampilo ukuze uzovikela impilo yengane yakho,” kusho yena ngesitatimende.
eNewcastle, eMurchiso naseMahatma Gandhi mathathu amantombazane aneminyaka engu-16 athole izingane ngoKhisimusi.
UDhlomo uthi lokhu kuyakhathaza kakhulu ngoba bahlezi befundisa abantu abasha ngokuziphatha nokuthi bazivikele uma beya ocansini.